Udidi: DOW UJONES
UDow Jones Bullish ukuqhubeka komdlalo
Inkxaso ephambili: 33800
Ukuchasana okuphambili: 34100 - 34500
Emva kokuwa kunye nokuvalwa kwe-bearish kakhulu ngolwesiHlanu odlulileyo, iDow iyalile inqanaba lama-33000 lokuprinta ikhandlela lemihla ngemihla (+ 2.76%). Iintsuku ezi-2 zokugqibela zibekwe kumda weDow kodwa amaxabiso aprintwe ngokuqhubekeka (unxantathu othe tyaba) kanye kwisiseko sangaphambili esaphukileyo.
Abathengi baqhubeka nokukhetha amaxabiso aphezulu nangaphezulu ngokudala imilinganiselo ephezulu eneflethi ephezulu.
Le patheni inamathuba aphezulu okuphumelela kwaye ngokongezwa kwamabango aphantsi okungaqeshwa e-US sinokubona amandla emva kwekhefu lommandla.
Ukuma kwethu kungaphantsi kwemigangatho yangoLwesibini kuba le yeyokuqala ephantsi yale patheni kwaye kufuneka ukuba amaxabiso aqhekeke ngaphantsi kwayo umbono wethu worhwebo awusasebenzi.
I-US 30 yokuthengisa-ukuThengisa inokuNgaphaya!
I-US 30 yayithengisiwe ngamandla kwixesha elifutshane kodwa ngoku ifikelele kwindawo yenkxaso eyomeleleyo. Ukwehla okungaphezulu kwe-USD kunokunceda uDow Jones ukuba aqale ukwanda kwakhona. Namhlanje kunokuba yinto ebalulekileyo kwi-greenback njengoko i-US ikhupha idatha yayo yokunyuka kwamaxabiso.
Ngokobuchwephesha, i-bias ihlala ikwi-bullish ngaphandle kokuthengisa okokugqibela. Iphethini yokubuyela umva ngokujikelezayo ejikeleze indawo yenkxaso yangoku inokusinceda ekubambeni iswing entsha ephezulu.
I-US 30 yehlile emva kokusilela ukufikelela kwi-R1 yeveki (35,174) okanye ukuzinza ngaphezulu komgca we-150% weFibonacci. Ngoku ifumene inkxaso kwi-S1 (34,115) ebuyisa umva.
Ime kwi-34,176 ngexesha lokubhala ukuzama ukuzinzisa ngaphezulu komgca we-pitchfork ephezulu (UML). Ukwaphuka okungeyonyani ngezantsi kwe-S1 kulandelwa ukudityaniswa okuncinci ngaphezulu komgangatho ophezulu we-median (UML) kunokuzisa ithuba elitsha elide.
I-rally yokugqibela yayilindelwe emva kokuba isilele ukubuya isezantsi isiya kwi-34,047 nasemva kokuqhekeka kwayo ngaphezulu komgca we-pitchfork ephezulu (UML).
Nceda ujoyine iqela lethu le-VIP Telegram APHA ukuba ufuna ukufumana umqondiso olandelayo wokuthenga kwi-US 30!
tags Dow Jones, thina 30
IDOW YAPHULA AMANQAKU EVEKI
Inkxaso ephambili: 32710
Ukuchasana okuphambili: 32800 - 33000
I-Dow (i-US30) ithengise kubume be-bearish ukusukela ngomhla we-18 kweyoKwindla ukuya kwezantsi izolo kwi -1172 pip move (-3.52%). Izolo sibone umtsalane omkhulu wabathengi beza bevela kwixabiso eliphantsi lokunyusa ixabiso ukuze baphinde baphinde bathathe ipivot yeveki.
I-pivot yeveki nganye yayixhoma icala ukusukela ekuqaleni kweveki kuba ikwahlangana nenqanaba langaphambili elaphukileyo. Ixabiso sele liqhekekile ngeli nqanaba emva kokulahlwa oku-6 okwenza oku kube yinto ephezulu kakhulu yorhwebo lwe-momo.
Ukurhweba ngeSitalato iWall Street ezantsi njengoko abatyali mali behamba ngaphambi kweNtlanganiso yeFOMC
Ukuhlaziywa: 17 Matshi 2021
I-S & P 500 (i-SPX) kunye ne-Nasdaq 100 (NDX) yehle isezantsi ngolwesiThathu, njengoko isivuno sebhondi yase-US sihlanganisiwe phambi komgaqo-nkqubo we-FOMC omiselwe umhla wanamhlanje, apho abarhwebi bebeza kujonga ukuba ngaba ibhanki engumbuso inyusa amaxabiso emali ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe.
Isilinganiselo seminyaka eli-10 isivuno esirekhodishe iinyanga ezili-13 eziphakamileyo ezijikeleze i-1.67%, ezonakalisa imfuno yezinye izitokhwe zobuchwephesha bokukhula okuphezulu, oko ke kwabangela ukuba i-NDX yehle ngaphezulu kwe-1%.
Ixhala lokuba ukudlula kwento enkulu ye-1.9 yezigidi zeerandi iphakheji yokuvuselela amandla kunokubangela ubushushu kuqoqosho lwase-US kubangele irali kwityala lexesha elide likaNondyebo, itsalela phantsi izalathiso eziphezulu zeWall Street kwiincopho zazo zamva nje.
Ngeli xesha, iingcali zezoqoqosho zilindele ukuba iFed ikhuphe uqikelelo lwe-GDP ye-2021 ekupheleni kwentlanganiso yayo yeentsuku ezimbini ngoLwesithathu. Usihlalo we-Fed uJerome Powell uzakubamba inkomfa noonondaba kwangoko emva kwentlanganiso, apho aya kuthi ngokuqinisekileyo aqinisekise ukuba uqoqosho lungasuka ngaphandle kokwenza ukunyuka kwamaxabiso okugqithisileyo.
Amanqanaba okunyuka aya kuza kungekudala: Uqoqosho
Ngelixa iFed iqinisekisile ukuba iyakugcina imeko yayo devish de kube yimarike yezabasebenzi ichache ngokupheleleyo, abacebisi balindele ukuba abanye abenzi bomgaqo-nkqubo bacebise ukunyuka kwinqanaba ngo-2023. Oko kwathethi, ezinye iingcali zezoqoqosho zilindele ukunyuka kwamazinga okuza ngaphambili kunoko, noMorgan Stanley ukuqikelela uhlengahlengiso kumgaqo-nkqubo wezemali ebutsheni bonyaka ozayo.
UArthur Weise, iGosa eliyiNtloko loTyalo-mali kwiKingsland Growth Advisors, uqaphele ukuba:
“Andiqondi ukuba abatyali zimali bakholelwa ekubeni iFed izakutshintsha indlela emi ngayo, kodwa kukho uloyiko lokwehla kwamandla emali ukutsiba kwixesha elizayo. Intengiso inoluvo lokuba isivuno seminyaka eli-10 singaphezulu, kwaye ukuba iFed isayina nantoni na ehambelana naloo mbono, singatsiba ngaphaya kweepesenti ezi-2. ”
I-SPX kunye neDow Jones (i-DJIA) iqale iveki kumanqanaba amatsha, ngelixa i-Nasdaq 100 iphantse yachacha ngokupheleleyo kulungiso lweveki ephelileyo. Ngexesha lokushicilela, i-S & P 500 ithengisa nge -0.51%, i-Nasdaq 100 nayo iphantsi nge -1.26%, ngelixa i-Dow inyuke nge-0.05%.
tags DOW, NASDAQ, I-S & P500, Idonga isitalato
-3.05% Ukuhamba kwi-Dow kusinika ithuba lokuthenga
Ukuhlaziywa: 5 January 2021
I-Dow yaphahlazeka ngaphezulu kwe-3% izolo nge-Mvulo yokuqala yokurhweba ngo-2021. Eli nyathelo alisiyeyomqondiso we-Bearish kodwa lithuba lokuthenga ngediphu ukuba imeko elandelayo iyadlala:
Unyulo lwe-Senate yase-Georgia luyaqhubeka kwaye oku kubalulekile kwi-stocks. Ukuphumelela kweDemokhrasi kuya kuthetha ukuba iiDemokhrasi ziya kulawula zombini iNdlu kunye neNdlu yeeNgwevu kunye nokudlulisa amatyala anoxanduva kwezentlalo (iipakeji ezinkulu zokukhuthaza) ziya kudlula ngaphandle kokuchasa. Oku kuthetha ukuba kuninzi okuthe kratya kwizitokhwe.
Kwicala lobugcisa sidinga ukuqinisekiswa:
-Loluhlu lweseshoni yanamhlanje lumxinwa kodwa ngokujonga kuluhlu lwayizolo sinegumbi lokuhamba sizolile.
Indawo ye-30100-30200 inkulu kakhulu ngokuvula imihla ngemihla, i-POC kunye nokuphakama kwemihla ngemihla ngokudibana.
Ixabiso kufuneka liphule ngaphezulu kwale ndawo ukuze kuqinisekiswe ukubaleka okuqhubayo
UDow Jones ubuyela kwindawo yethu yokuthengisa
Ukuhlaziywa: 30 Disemba 2020
I-Dow Jones ivale i-negative -0.22% izolo emva kokuhlanganisa + i-0.75% kuwo onke amaxesha aphakamileyo ajikeleze i-30590 phakathi kokunikezelwa koncedo lwezemali olungaphezulu olwamkelweyo yiCongress. Umthetho osayilwayo omtsha utyikityiwe waba ngumthetho kwaye iidollar zokutshekisha ezingama- $ 600 ngoku ziyahanjiswa kubemi baseMelika.
I-Senate iNkokheli yeNkokeli enkulu uMitch McConnell uvimbe izolo iinzame zamaDemokhrasi ukunyanzelisa inyathelo elikhawulezayo lokunyusa isikhuthazo ngqo ukusuka kwi-600 yeedola ukuya kwi-2000. Ukuphendula u-senator u-Bernie Sanders uceba ukuthintela ivoti kwinkxaso mali ye-Pentagon (yoKhuselo) ngokufaka ivoti kwi-override yexesha elide kangangoko anakho ukuze enze iNkokheli ye-Majority uMitch McConnell abize ivoti kwezi iitsheki ezingama-2,000 XNUMX ze-Covid.
Intiyo yentiyo yokungaqiniseki kunye nesiphithiphithi. Nanku apho umbono wethu omfutshane kwiDow uza kudlala khona.
Akunakulindeleka ukuba ukonyuka kokunyusa ngokuthe ngqo kuya kuvota kwangoko (ixesha laseMelika) kwaye oku kufanele ukuzisa abathengisi kunye nokuphela kwengeniso kuthathelwa ingqalelo inyani yangoku yezopolitiko engaqinisekanga kwinaliti yotyalomali olongezelelekileyo.
Umnumzana John Templeton: Oyena Mrhwebi mkhulu weSitokhwe kwiHlabathi lama-20
Ukuhlaziywa: 19 Disemba 2020
Igama: Mnumzana John Templeton
Umhla wokuzalwa: Novemba 29, 1912
Ubuzwe: I-Bhritane, iBahamian (kunye ne-Melika yangaphambili
Umsebenzi: Utyalomali, usomashishini, umphandi, ububele
Indawo yewebhu: Templeton.org
Ubomi kunye nomsebenzi
USir John Templeton wazalelwa eWinchester, eTennessee, eMelika. Waya kwiYunivesithi yaseYale (apho wayengumphathi weshishini elincedisayo kwimagazini yehlaya lekhampasi). Wayexhasa imfundo yakhe ngokudlala i-poker-ngeziphumo ezilungileyo. Waphumelela ngemidlalo ebalaseleyo. NjengoRhode Scholar, wakwazi ukuya kwiYunivesithi yaseOxford, ephethe i-MA kwezomthetho.
Uye waba ngusozigidigidi ngokuba ngumntu wokuqala ukuthatha inxaxheba kwiimali zehlabathi ezahlukeneyo. Waseka i-Templeton Growth Fund, Ltd kwaye wayephakathi kwabantu bokuqala abatyala i-Japan ngeminyaka yoo-1960 (ezinye zezona ngxowa mali zinkulu neziphumelelayo zehlabathi).
Iwebhusayithi yakhe ityhila ukuba uthathe iqhinga "lokuthenga ephantsi, athengise phezulu" ngokugqithileyo, ekhetha izizwe, amashishini, kunye neenkampani ezitshayisa kakhulu, into awayeyibiza ngokuba "ngamanqaku okuphelelwa lithemba." Xa kwaqala imfazwe eYurophu ngo-1939, waboleka imali yokuthenga izabelo ezili-100 nganye kwiinkampani ezili-104 ezazithengisa ngedola enye okanye ngaphantsi, kuquka neenkampani ezingama-34 ezazingasebenzi. Bane kuphela abafumaneke bengenaxabiso, kwaye wafumana inzuzo enkulu kwabanye.
Kwakhona, uyaziwa, ngexesha loxinzelelo lwee-1930s, ukuthenga izabelo ezili-100 ze-NYSE nganye yenkampani edwelisiweyo eyayithengisa ngaphantsi kwe- $ 1 isabelo ($ 17 namhlanje) (iinkampani eziyi-104, ngo-1939), kamva zenza amaxesha amaninzi imali ibuya xa ishishini laseMelika lathathwa njengesiphumo seMfazwe yesibini (II) kwiWikipedia).
Uchongwe njengomnye wabona bantu banikela ngesisa kwimbali yehlabathi, enikela ngaphezulu kwe- $ 1,000,000,000 yeedola kwizibonelelo. Wabushiya ubumi bakhe baseMelika ngo-1964, nto leyo eyamenza wakwazi ukugcina imali eyizigidi ezili-100 zeedola kwirhafu yase-US xa wayethengisa ingxowa-mali yakhe yotyalo-mali. Loo mali yayisetyenziselwa ukunceda abantu. Wayephindele kabini ukuba ngummi waseBahamian kunye nowaseBritane kwaye wayehlala eBahamas.
Wabhala iincwadi ezininzi, kuquka:
A. Ubutyebi beNgqondo noMoya: UJohn Marks Templeton kaNondyebo waMazwi wokuNceda, ukukhuthaza kunye nokuPhila (2006)
B. IiNiggets zegolide (1997)
C. Ukuthenga kwindawo yokuPhelelwa lithemba: Ixabiso eliTandathu lokuTyala imali kwiTshayina ukuya kwioyile kwezolimo (2010)
D. Ukutyala imali kwiNdlela yeTempleton: Iindlela zokuThengisa iiMarike zeXabiso lokuTyala imali kwiNtsomi yeBargain (2007)
E. Imithetho yoBomi yeHlabathi: Imigaqo-siseko engokomoya engunaphakade engama-200 (1998)
Kunye nezinye iincwadi
Njengomntu onesisa, u-Sir John waseka i-John Templeton Foundation, ilayibrari, ibhaso kunye nekholeji ephantsi kweYunivesithi yase-Oxford. Uye wanikela ngesixa esikhulu sezinto zakhe zexabiso kwiJohn Templeton Foundation, neyasekwa ngo-1987. Kwakuloo nyaka mnye, wadalwa waba nguK Knight Bachelor ngu-Queen Elizabeth II ngenxa yezinto ezininzi awazenzayo.
UChartered Financial Analyst (CFA) ongumqeshi, Mnumzana John wafumana ibhaso lokuqala le-AIMR lokugqwesa ngo-1991. Ngo-1999. Ngo-1996, wonyuselwa kwiJunior Achievement US Business Hall of Fame, kwathi ngo-2003, wawongwa ngebhaso likaWilliam E. Simon loBunkokeli obuPhilayo. Wabizwa njengomnye wemagazini yeXesha eli-100 labona bantu banempembelelo ngo-2007.
Ukuba lilungu lobomi beCawa yaseRhabe ubomi bakhe bonke, wayesebenza kwizikhundla ezahlukeneyo zecawa.
USir John wayetshatile kabini, esikelelwe ngabantwana. Uqale watshata no Judith Folk, owasweleka kwingozi yesithuthuthu ngo 1951. Emva koko watshata no Irene Reynolds Butler, owasweleka ngo 1993.
USir John Templeton udlulile waphumla ngoJulayi 8, 2008, eNassau, eBahamas, eneminyaka engama-95.
1. Ukuthobeka kubalulekile kuthi njengabarhwebi; kukwanjalo nakwiimeko ezintle, ukungabikho koxinzelelo kunye noqeqesho.
2. Iimarike eziyinkunzi zivela kwiimvakalelo zokungabi nathemba, ziyakhula ngokungaqiniseki kwaye zikhule ngokwethemba kunye nokuzithemba, emva koko zife kumnandi. Xa uluntu luphambene malunga nesitokhwe, lixesha lokuba uthengise.
3. Yiphephe imeko yomhlambi. Oko abantu abaninzi bacinga, kholelwa akunakunceda. Oku kuyakuhlala kuyinyani ngonaphakade kwilizwe lezorhwebo notyalo mali. Tyala imali kwinqanaba lokungazithembi. Izitokhwe zibalasele kubagqatswa 'bokuthenga' xa abantu bengafuni ukuzithenga kuba zisoyikeka. Nceda ufunde ikhondo likaSir John apha ngasentla kwakhona. Cinga ngendlela awayenza ngayo imali yakhe. Utyalomali eJapan xa uninzi lwabantu lwalucinga ukuba olo luvo luphambene. Wathengisa izitokhwe zakhe xa uluntu lubonisa ukuzithemba okugqithisileyo kubo, xa amaxabiso kunye nolindelo lwaluphezulu. Kukho amathuba otyalo-mali kwihlabathi liphela, hayi e-US kuphela. UMhlekazi uJohn ngokwakhe uthe: “Amanye amakhwenkwe aseYale avela kwiintsapho ezizizityebi, kwaye akukho namnye kubo otyale imali ngaphandle kwaseMelika, ndaye ndacinga, 'Kukuzingca oku. Kutheni le nto ujonge nje kude okanye ubona kufutshane njengokujonga eMelika kuphela? Akufanele ube nengqondo ephangaleleyo ngakumbi? ”'
4. Ukuba ufuna ukudlala kakuhle kunesihlwele, kufuneka wenze izinto ngokwahlukileyo kwisihlwele. Kuba uninzi lwabarhwebi luphulukana, kufuneka wenze oko uninzi lwabarhwebi lungakwenziyo ukuze uphumelele.
5. Kuyenzeka ukuba wenze imali kuphela kuhlalutyo olusisiseko (njengoko kunokwenzeka ukwenza imali kuphela wenze uhlalutyo lobuchwephesha). UMhlekazi uJohn akazange enze iinkqubo zobugcisa; izigqibo zakhe zotyalo-mali wazisekela kuphela kwizinto ezisisiseko. Abo basebenzisa uhlalutyo lobuchwephesha kuphela akufuneki bagxeke abo basebenzisa iziseko kuphela: kwaye ngokuchaseneyo. Nayiphi na indlela yokurhweba ilungile, nokuba ithande kangakanani, ukuba nje yenza imali.
6. UMhlekazi uJohn - nangona wayengumntu onesisa - akazange achithe imali eninzi kakhulu. Wayengenomdla kubathengi, waqhuba eyakhe imoto, akazange abhabhe kwiklasi yokuqala kwaye waphila unyaka wonke kwiiBahamas. Ukuba sisityebi akuthethi ukuba kuya kufuneka siphile ubomi obunobunkunkqele, obuthandabuzekayo nobubizayo. UWarren Buffet ngomnye umzekelo olungileyo.
7. UMhlekazi uJohn, naye ebenomdla kwizinto zokomoya, uthe: “Sizama ukweyisela abantu ukuba akukabikho mntu ubambeleyo nge-1% yento enokwaziwa malunga nezinto zakwamoya. Sikhuthaza abantu ukuba baqale ukusebenzisa kwa ezi ndlela zesayensi bezinemveliso kwezinye iindawo, ukuze bafumane izinto zokomoya. ”
Eli nqaku laveliswa kwakhona kwincwadi enesihloko: Ingqondo kwiNgqondo yeeNtengiselwano eziPhambili. ”
tags Uhlalutyo oluphambili, Mnumzana John Templeton, ukukhetha isitokhwe
I-Dow iphinda ibeke umva kwakhona
I-Dow Jones iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona, ibuye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziselwe ukuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona, i-Dow Jones iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona.
Eli lixesha lesithathu kule veki liphindwe lavavanywa kwaye laliwa uphawu lwangaphambili kwaye emva koko lavulwa ekuvuleni. Silindele ukuba kwenzeke okufanayo nanamhlanje emva kokuba amaxabiso eqhekezwe ngamanqwanqwa angaphambili.
Iithagethi zihlala zisezantsi kwentshukumo yangaphambili ejikeleze i-30100 kodwa siza kujonga ngokusondeleyo kwi-30200 evulekileyo namhlanje yeenkunzi zeenkomo ezingena phakathi.